Izindaba - Izinzuzo nokuqapha komshini wokuhambisa insipho we-infrared
Ubuhle kanye nokuqapha komshini wokuhambisa insipho we-infrared
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kokuqwashisa komphakathi ngamagciwane asekhaya, ukusetshenziswa okuhlakaniphile kwemikhiqizo yokubulala amagciwane sekuyindlela eshisayo yamanje. Izandla ziyizingxenye ezivame kakhulu zokuthinta zonke izinhlobo zamagciwane, ngakho-ke ukubaluleka kokugeza izandla kuyabonakala. Kepha uma usebenzisa i-sanitizer yesandla sohlobo lokucindezela lendabuko noma insipho yohlobo lokukhuhla ukuze ube khona kwezingubo eziqhubekayo kungenzeka ukuthi kuthelele amathuba. Njengemikhiqizo “eyinhloko” yokubulala amagciwane, imishini yokuhambisa insipho ye-infrared izoba yinto evamile kuwo wonke amakhaya nezindawo zomphakathi.
Izinzuzo zekhompiyutha yensipho yokungenisa infrared
1. Isisetshenziswa sokungenisa insipho sihlukile kwesokuhambisa insipho yokuxhumana, esusa amathuba okutheleleka futhi ifaneleke kakhulu ekufuneni izinkinga zezempilo.
2. Idispenser dispenser ingaphansi kwenkambu yezobuchwepheshe obuphezulu, engeza iphunga lesayensi nobuchwepheshe ezinsukwini ezinzima.
3. Isilawuli sesepha sokungeniswa seso kulula kakhulu ukuthi izingane zisisebenzise.
4. Insimbi yensipho yokungeniswa kwe-infrared isebenzisa amandla amancane, izindleko eziphansi, ukusetshenziswa komndeni nakho kubiza kakhulu.
Ukunakwa ekusetshenzisweni kwensipho yokufaka insipho engaphansi
1. Idispenser dispenser inendawo enezinga eliphansi loketshezi lwensipho. Lapho uketshezi lwensipho lusetshenziswa ezindaweni ezingaphansi, kuyadingeka ukulufaka ngesikhathi, uma kungenjalo umhlinzeki wensipho ngeke akwazi ukukhiqiza uketshezi.
2. Imishini yokuhambisa insipho ayikwazi ukugezwa ngamanzi. Ngokuvamile, abahlinzeki bensipho yizinto ze-resin ze-ABS noma izinto zensimbi engagqwali, futhi zidinga ukusulwa buthule ngamathawula amanzi
3. Gwema ukuqhuma, ukushaya ngamandla nokuwa ngesikhathi sokusebenza, ngaphandle kwalokho kungalimaza ukwakheka okuqondile kwe-distill ye-induction bese kuholele ekwehlulekeni ukusebenza.
4. Lapho umshini wokuhambisa insipho ungasasetshenziswa isikhathi eside noma kufanele kususwe ibhethri phansi komshini ukugwema ukuvuza kwebhethri nokulimala komshini.
5. Sicela ungagobisi umzimba wensipho yokuhambisa izinsimbi ukugwema ukuvuza kwesikhucululi sesandla.
6. Uyacelwa ukuthi ubeke isiphuzo sensipho sokungeniswa endaweni eshisa kakhulu evamile, ungayifaki endaweni yokukhanya kwelanga, ngaphandle kwalokho kungathinta umsebenzi wokusetshenziswa komkhiqizo.